Bụrụ onye ọrụ nyocha na OSRFramework | Site na Linux
Zoo njirimara anyị na ịntanetị ọ na-esiwanye ike, n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ, algọridim na teknụzụ nke emepụtara iji soro ndị ọrụ wee chọpụta omume ha. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, a na-eme ngwá ọrụ ndị a iji wakpo ndị omempụ na-ezo na amaghị aha nke netwọk iji mee mpụ na n'ọnọdụ ndị ọzọ iji ledoo, mebie ikike nke ụmụ amaala ma ọ bụ zuo ozi.
Otu n'ime ọtụtụ puku ngwaọrụ ndị e kere iji soro ndị ọrụ na ịntanetị bụ OSRFmeme, nke na-enye anyị ohere iji chọọ onye ọrụ na ọtụtụ puku saịtị gụnyere na ntanetị miri emi, na-atụba nkọwa zuru ezu banyere akara ha na weebụ.
Site na ngwa ọrụ a na-emepe emepe dị ike, anyị nwere ike ịghọ ndị ọrụ nyocha nke ọma, dabere na ozi dị iche iche, jikwaa ndị na-eme mpụ, ndị na-efu ma ọ bụ ọbụna asọmpi ahụ.
1 Kedu ihe bụ OSRFramework?
2 Esi wụnye OSRFramework
Kedu ihe bụ OSRFramework?
Ọ bụ ngwa ọrụ mepere emepe, nke ndị Spain Brezo na Rubio mepụtara, ndị otu dị iche iche jikọtara ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ nke na-enye ohere ịrụ ọrụ ọgụgụ isi ngwa ngwa na akpaghị aka. Ngwaọrụ na-enye ohere ịlele aha ndị ọrụ na ihe karịrị 200 weebụsaịtị yana ụfọdụ peeji zoro ezo na weebụ dị omimi, ọ na-emekwa nyocha miri emi nke dns, email n'etiti ozi ndị ọzọ nke profaịlụ ọ bụla.
Ngwaọrụ a na - enye anyị ikikere iji soro onye ọrụ n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ netwọkụ dị mkpa niile dị taa. N’oge gara aga e jiri ya mee ihe akara nke ndị na-eyi ọha egwu, ma enwere ike iji ya mee ihe na ebumnuche na-enweghị ngwụcha, ọkachasị ndị ebe anyị chọrọ ijikọ ozi nke onye ọrụ ma ọ bụ nke asọmpi ahụ.
A na-arụ ọrụ a na Python n'ihi ya, ọ bụ ikpo okwu ma dịkwa mfe iji, yana oke nhazi anyị nwere ike ịchọta ozi na-ezo aka n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ profaịlụ ọ bụla, yabụ ndị na-eme nchọpụta nwere ike iji ngwá ọrụ a dị ka mgbakwunye zuru oke mgbe ị na-enyocha ndị mmadụ.
Esi wụnye OSRFramework
Ntinye nke OSRFmeme Ọ dị oke mfe, bụrụ na etinyegoro ma tinye iwu ndị a: sudo pip install osrframework
Site na nke a anyị nwererịrị ngwa ọrụ niile OSRFramework na-enye anyị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ebe netwọkụ mmekọrịta jikọrọ aha njirimara, anyị nwere ike iji usufy.py dị ka ndị a
Ma ọ bụ na-ada na ọ bụrụ na anyị chọrọ soro ihe email anyị nwere ike ime ka eji mailfy.py dị ka ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Bụrụ onye nyocha nke mebere OSRFramework
Anọ m na-eji Python n’oge na-adịbeghị anya ma amaghị m otu esi edozi nsogbu ahụ mgbe ị na-etinye ya.
SyntaxError: Nne na nna ezighi ezi na oku iji 'bipụta'
Ọ dị ka ọ na-eji syntax nke eke 2 ma amaghị m otu esi eme pip na ụdị ahụ ọ bụghị na 3
Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka Daalụ
Zaghachi Simón Martínez
Ndewo kedu ka ị mere, kama ịkpọ sudo pip wụnye osrframework mee ya dị ka ndị a sudo pip2 wụnye osrframework ka ị ga-eji Python2 ma ọ bụghị python3
Ihe dị mma ị ga - eme bụ ịwụnye virtualuv na imepụta ebe dị mma maka ụdị ekekpa ịchọrọ, ka ị ghara ịchụ àjà ụdị nke sistemụ arụmọrụ gị ma ọ bụ nwee ịtụgharị
Adịghị m ọkachamara n'okwu ndị a, mana echere m na ụfọdụ ohere ị nwere ike iji bụ:
Jiri Python 2.7 ma ị gaghị enweta nsogbu ahụ.
Jiri Python 2 ka 3 bụrụ ihe eji arụ ọrụ (dị ka 2to3). Nsogbu dị na nke a bụ na ọ nwere ike iwepụta karịa njehie karịa ka ịnwere.
Wụnye pyenv iji ụdị Python dị iche iche mee ihe na gburugburu ebe obibi (na-etinyeghị ya na folda sistemụ dịka / bin or / usr [/ local] / bin). Ga-enwe ebe dịpụrụ adịpụ iji rụọ ọrụ na ụdị Python ị chọrọ.
Echere m na m gaara enweta enyemaka.
Ndewo, emechara m usoro ahụ niile dị mfe mana amaghị m ma m ka mere ihe ọjọọ n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ m, agbasoro m usoro ahụ, m na-eji manjaro 17 na kde
ha nwere ike iwunye ma jiri ok?
Zaghachi ka mmeri baca
Nke a na-agwa m nke a na cali linux m nwere ike iwunye ya nke ọma mana mgbe m na-agba koodu ahụ:
bash: /usr/local/biin/usufy.py: ekweghi ekwe
Gịnị nwere ike ịbụ? M ugbua dị ka mgbọrọgwụ ọrụ
ỌTTT. Oge dijo
Faịlụ "/usr/local/bin/mailfy.py", akara 11, n'ime
Faịlụ "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/osrframework/mailfy.py", akara 468, n'isi
Parser = nwetaParser ()
Faịlụ "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/osrframework/mailfy.py", akara 433, na getParser
groupProcessing.add_argument ('- e', '–extension', metavar = », nargs = '+', nhọrọ = ['csv', 'gml', 'json', 'ods', 'png', 'txt' , 'xls', 'xlsx'], chọrọ = Falgha, ndabere = DEFAULT_VALUES ["ndọtị"], emereme = 'ụlọ ahịa', enyemaka = 'ndọtị ndọtị maka faịlụ nchịkọta. Ndi an-kpọ: xls.')
Ama m na onye a nwere ike inyere m aka.
Nyocha PAM - SME Netwọk